बीमा व्यवसायको भविष्य उज्ज्वल छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता बीमा व्यवसायको भविष्य उज्ज्वल छ
on: ११ भाद्र २०७५, सोमबार ०७:१० अन्तरवार्ता
बीमा व्यवसायको भविष्य उज्ज्वल छ
शिवनाथ पाण्डे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स
बचत र सुरक्षाका दृष्टिकोणले जीवन बीमाको विशेष महङ्खव रहे पनि आममानिसमा यसप्रति चासो छैन । बीमाको पहुँच थोरै जनतामा सीमित छ । बीमा कम्पनीको सङ्ख्या पछिल्लो वर्ष बढेसँगै व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा पनि बढेकोे छ । पछिल्लो समयमा जीवन बीमाको अवस्था, बीमाको पहुँच, यसको भविष्य तथा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको अवस्थाबारे सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेस“ग पोखरा संवाददाता सुरेन्द्र पौडेलले गरेको कुराकानी :
बीमाप्रति आम सर्वसाधारणको चासो कस्तो छ ?
पहिला बीमा व्यवसाय आम सर्वसाधारणबीचमा खासै परिचित थिएन । बीमा समितिले दिएको आ“कडाअनुसार करीब ७ प्रतिशतको पहुँचमा बीमा छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारको समेत जोड्ने हो भने ११ प्रतिशत पुगेको पाइन्छ । बजारमा बीमाका नयाँनयाँ कम्पनी थपिएका छन् । लाइसेन्सिङ पनि नयाँ आएको छ । त्यसपछिको रेट १४ प्रतिशत छ भन्ने बीमा कम्पनीको दावी छ । तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा अहिले बीमासम्बन्धी कुरा मानिसमा धेरै पुगेको छ । कम्पनीहरू गाउँ–गाउँमा पुग्ने गरेका छन् । सञ्चार माध्यमका कारण पनि मानिसले बीमासम्वन्धी धेरै कुरा बुझेका छन् । तुलनात्मक रूपमा यो व्यवसाय पहिलेभन्दा राम्रो र व्यवस्थित हुँदै आएको महसूस भएको छ ।
जीवन बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण कस्तो छ ?
बीमा कम्पनी अभिकर्तामार्फत मानिसमा पुग्ने प्रक्रिया हो । जीवन बीमा भनेको के हो, यसको फाइदा के छ, भविष्यमा दुर्घटना भएमा के–कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने कुरा अभिकर्ताले आममानिसलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । आममानिसले बीमालाई बचत र सुरक्षा दुवै किसिमले लिएका छन् । विशेष कारणले केही दुर्घटना भएमा आश्रित परिवारको जीवन यापनको लागि सहयोग पुग्छ । अहिलेको परिवेशमा प्रायः सबै मानिस जीवन बीमाप्रति आकर्षित भएका छन् । जीवन बीमा आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरा आममानिसमा पुर्‍याउनुपर्छ । यससँगै बीमा व्यापक रूपमा बिस्तार हुन्छ । जीवन बीमामा आकर्षण छ, अझै आकर्षण बढाउनुपर्छ ।
बीमा व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो भनिन्छ, कारण के हो ?
बीमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भनेर भन्न मिल्दैन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु पनि हुँदैन । कति बीमा कम्पनी भए भने हाम्रो आवश्यकता पूरा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । नयाँ कम्पनी आउनु भनेको बीमा व्यवसाय झनै फस्टाउनु हो । दूरदराजका क्षेत्रमा पनि यस व्यवसायको प्रचार–प्रसार हुन्छ । बीमाप्रति आममानिस जागरुक हुन्छन् । पहुँच ७ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत पुग्नु भनेको नयाँ कम्पनीका आगमनले नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । बीमितलाई अनावश्यक आश्वासन भने दिनुहुँदैन । हाम्रो कम्पनी राम्रो छ । राम्रो सेवा सुविधा छन् भन्दै अन्य कम्पनीप्रति नकारात्मक बताउनुहुँदैन । नियम कानूनभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।
बीमा कम्पनीबीच मर्जरको सम्भावना कस्तो छ ?
मर्जर राज्यको नीति हो । राज्यले नीति लिन्छ भने मर्जर हुनु नराम्रो होइन । कुनै पनि दुई संस्था मर्जर हुँदा त्यसको सिनर्जी इफेक्ट झनै विशाल हुन्छ । इफिसियस्नी आउँछ । लगानी गर्ने क्षेत्र ठूलो हुन्छ । बीमा गर्ने क्षमता पनि बढ्छ । मर्जर राज्यको आवश्यकता हो । मर्ज गर्नु नराम्रो होइन ।
बीमा व्यवसायप्रति राज्यको भूमिका कस्तो छ ?
बीमा व्यवसायलाई राज्यले अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बाका रूपमा लिएको छैन । अहिलेसम्म यस व्यवसाय राज्यको प्राविधिक क्षेत्रमा पनि परेको छैन । अहिले विस्तारै राज्यले यसलाई पनि अर्थतन्त्रको मुख्य पाटोका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा महसूस गरेर नयाँ ऐन तर्जुमा भइरहेका छन् । प्राधिकरणको अवधारणा विकास भएको छ । बीमा समिति यस व्यवसायलाई मर्यादित तथा सुशासित बनाउनुपर्छ भन्ने तरकिाले अगाडि बढेको छ । विभिन्न किसिमका निर्देशन जारी भइरहेको अवस्था छ ।
नेपालमा बीमा व्यवसायको भविष्य कस्तो छ ?
नेपालमा बीमा बजारको भविष्य राम्रो छ । हामीले आममानिसबाट ५ वर्ष, १० वर्ष, २० वर्ष, २५ वर्ष, ३० वर्षको दायित्व बोकेका हुन्छौं । अहिले गरेको बीमाको ३० वर्षसम्म प्रिमियम सङ्कलन हुँदै जान्छ । यो फण्ड एकदम ठूलो हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा पनि ठूलो हुन्छ । यहाँबाट जम्मा भएको रकम राज्यले विकासका काममा प्रयोग गर्न सक्छ ।
सूर्या लाइफको बजार अवस्था कस्तो छ ?
सूर्या लाइफ कम्पनीको अवस्था राम्रो छ । व्यवसायका हकमा पनि गत आर्थिक वर्षमा धेरै राम्रो प्रिमियम सङ्कलन गर्न हामी सफल भयौं । आर्थिक सूचाङ्क पनि सबै सबल छन् । पेनिट्रेशन पनि वृद्धि भएको छ । हामीले नियम कानूनको अधीनमा रहेर काम गरेकाले नै संस्था सबलीकरण भएको छ । बजारमा पनि सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सकोबारे राम्रो कुरा नै सुन्न पाइन्छ ।
बीमा व्यवसायका कमीकमजोरीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
बीमा कम्पनीका कमी कमजारी नै छैनन् भन्ने हुँदैन । काम गर्ने क्रममा कमीकमजोरी पक्कै पनि हुन्छन् । कतिपय कुरा नेतृत्वमा पनि कमी छ । दक्ष जनशक्तिको कमी छ । नियमनकारी निकायको रेगुलेशनका कारण व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ । लगानीको क्षेत्र पनि सङ्कुचित छ । यस क्षेत्रमा रहेका कमिकमजोरी हटाई समय सापेक्ष रूपमा काम गर्दै जानुपर्छ ।
दावी भुक्तानीमा दिने क्रममा कत्तिको सहजता हुन्छ ?
बीमा गरेको रकम योजना समाप्तीपछि दिनु नै पर्छ । दिन मिल्ने, नमिल्ने, भ्यालुएशन गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रोमा केही पनि छैन । जीवन बीमाको हकमा दावी नपाएको, डकुमेण्ट नपुगेको भन्ने कुरा विरलै मात्र हुन्छन् ।
नियमनकारी निकायको भूमिका कस्तो छ ?
नियमनकारी निकायको भूमिका पनि पछिल्लो समयमा निकै प्रभावकारी छ । सुशासनका काम भइरहेका छन् । संंस्था सञ्चालनसम्बन्धी नियम आएको छ । सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रक्रिया पनि आएको छ । बीमा क्षेत्र पनि बैङ्किङ क्षेत्र जस्तै हो । पछिल्लो समयमा बीमा समितिले सक्रिय भएर काम गरेको छ ।
बीमा क्षेत्रमा जम्मा भएको पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिँदैन ?
हामीले बीमितबाट प्रिमियरस्वरूप लिएको पैसा बैङ्कमा लगानी गर्न पाउँछौं । १० प्रतिशतसम्म शेयरमा लगानी गर्ने हो । बैङ्कले जुन दरमा ब्याज दिन्छ त्यो दरका आधारमा हाम्रो लगानीको प्रतिफल देखिने अवस्था छ । बैङ्कको ब्याजदर घटेमा हाम्रो आम्दानी पनि घट्ने भयो । अहिले भएको लगानीको नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र छनोट गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सके राम्रो हुन्छ ।